Eyona indices zichaphazelekayo kwimarike yemasheya yaseSpain | Ezezimali
I-Barcelona Stock Exchange, eyinxalenye yeqela leBolsas y Mercados Españoles (BME), iqhubekile nokuphonononga ukwenziwa kunye nobunzima beenkampani ezibandakanyiweyo kwi-BCN INZUZO-30, BCN ROE-30 kunye ne-BCN PER-30 indices, esekwe kwiziphumo ezifunyenwe ziinkampani esele zikhankanyiwe ngasekupheleni kuka-2018. Kolu sapho lwee-indices, inzuzo yeenkampani, ubukhulu obubalulekileyo kwindaleko yazo, ziyinxalenye yeekhrayitheriya zokulinganisa, zinika umbono wokuziphatha kwentengiso Yokhuseleko lwaseSpain oluluncedo kwaye olwenza ireferensi enomdla kulawulo lweephothifoliyo.
El Isalathiso se-BCN INZUZO-30, ezenziwa zizabelo zeenkampani ezingama-30 ezibandakanyiweyo kwi-IBEX 35 ngeyona ngeniso iphezulu, ayizibhalisi iinguqu kubume bayo. Ngokumalunga nobunzima iBanco Santander, i-BBVA, i-ArcelorMittal, iTelefonica kunye ne-Inditex zezokhuseleko ezinesisindo esikhulu, njengoko ziyinkampani ezinamanani aphezulu eenzuzo ngokugqibeleleyo.
Isalathiso se-BCN ROE-30, ezenziwa zizabelo zeenkampani ezingama-30 ezibandakanyiweyo kwi-IBEX 35 ngenqanaba eliphezulu lenzuzo / umlinganiso we-equity (ROE) kwaye, ke ngoko, inikezela ngembuyekezo ephezulu kwi-equity ebonisiweyo, irejista ukufakwa kweTecnicas Reunidas endaweni yeBanco Sabadell . Kule salathisi ubunzima obuphezulu buhambelana ukuya kwii-CIE zeZithuthi, iQela le-Amadeus le-IT kunye ne-Inditex, Ezizinkampani ezine-ROE ephezulu.
1 Ama-indices e-stock market e-Barcelona
2 Ivenkile yentengiso eSpain
3 Isalathiso ngokubanzi seMadrid Stock Exchange
4 Isalathiso sesahlulo
5 Olunye uhlobo lwentengiso
6 Akukho bukho beemarike ezintsha
Ama-indices e-stock market e-Barcelona
Kwinxalenye yayo, iIsalathiso se-BCN PER-30 Index, ezenziwa zizabelo zeenkampani ezingama-30 ezibandakanyiweyo kwi-IBEX 35 ebonisa amaxabiso asezantsi / umyinge womvuzo (i-PER), awunangxaki ngokwahluka kubume bayo. Izitokhwe ezinobunzima kakhulu kwesi salathisi yiArcelor Mittal, Iqela laMazwe ngaMazwe eliQinisekisiweyo leenqwelo moya (IAG) kunye neMerlin Properties SOCIMI, ezinePer esezantsi. Ukubhalwa kwezalathiso esele zikhankanyiwe zeBarcelona Stock Exchange, ukusukela nge-4 kaMatshi ngo-2019, kunokuboniswana nazo kwiwebhusayithi ye-Barcelona Stock Exchange (www.borsabcn.es), icandelo lee-Indices-Quotes, icandelo elikwicandelo le-BCN Indices (www.borsabcn.es/esp/indices/BBarna/ComposicionIndices.aspx).
Obu bubungqina bokuba kwii-equities zaseSpain kukho ubomi obungaphaya kwesalathiso esikhethiweyo kwimarike yaseSpain, i-Ibex 35. Ngemithombo ethile yesalathiso enokuthi ayaziwa ngokupheleleyo ngenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi kwaye inokuba yinzuzo kakhulu mzuzu uthile. Nangona kuyinyani ukuba zincinci ukhuseleko lweemali ezinkulu ezibonisa umsebenzi omncinci ngokomthamo wesivumelwano sabo. Ngeengxaki ezi zihlala ziveliswa yile misebenzi ukwenza ukonga okufumanekayo kunenzuzo.
Ivenkile yentengiso eSpain
Okwangoku kukho amagama amane apho izihloko zitshintshiselana phakathi kweearhente zezemali kwaye zizo IMadrid, iBarcelona, ​​iBilbao kunye neValencia. Ayizizo zonke ezifanayo kwaye bacinga ngokwahluka ngokubanzi ngokomthamo wezabelo zabo. Ngamanqanaba anokujikeleza amanqanaba asondele kakhulu kwi-80% kwaye kufuneka uyithathele ingqalelo mzuzu kanye wokuphuhlisa ukusebenza kwakho kwiimarike zezabelo.
Kwelinye icala, enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngokubhekisele kwezi ndawo zidwelisiweyo yile inento yokwenza nexabiso labo. Iinkampani ezifanayo azimelwe kuzo zonke. Akukho kuncinci, nangona le nto ichaphazela ikakhulu ukhuseleko oluncinci kunye noluphakathi. Kulapho ke kuboniswa umahluko omkhulu phakathi kwabameli beSpanish stock market. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Akumangalisi ukuba le yimarike yesininzi kakhulu kwaye le yinto esingazi kakuhle xa kuvulwa izikhundla kwiindawo zayo ezifanelekileyo zesitokhwe.
Isalathiso ngokubanzi seMadrid Stock Exchange
Isalathiso sesitokhwe apho uninzi lwemisebenzi kwiimalike zezabelo zamashishini zigxile kwaye lonke ukhuseleko oludweliswe kwezinye iimarike zikazwelonke zimelwe. Inqaku lesalathiso lokwenza utyalomali kunye nabatyali mali bamanye amazwe kuba idibanisa ikrimu yeenkampani ezidwelisiweyo kwindawo ekufutshane. Ngokukhuseleka kwawo onke amanqanaba, ukusuka kwelona lifanelekileyo ukuya kwelona linemali encinci. Oko kukuthi, kwaye ukuze iqondwe ngcono, ukubanjwa kwebhegi yaseSpain ngokugqwesa.
Ngelixa kwelinye icala, kufanele ukuba kukhankanywe ukuba i-Index ngokubanzi ye-Madrid Stock Exchange ibaluleke kakhulu kuyo amatyala aphezulu ukuvula nokuvala izikhundla kwezi asethi zemali. Ingenye yesalathiso sesitokhwe apho ukusebenza kwenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi kubonisiwe. Yaziwa ngaphezulu kwayo yonke into malunga nengeniso ephezulu yeenkampani ezizenzayo kunye nokuba zenziwe ngokhuseleko olunika ukubonwa okukhulu. Oko kukuthi, kulula kakhulu ukuhlengahlengisa ukungena kunye nokuphuma kwamaxabiso akho.
Mhlawumbi abatyali mali abaninzi abayazi ngalo mzuzu, kodwa ukhuseleko oluhambisa izabelo phakathi kwabanini zabelo zidityanisiwe kwisalathiso sezi mpawu. Ewe kulula kakhulu ukusebenza kuyo kuba zonke zinedinomineyitha efanayo kwaye ayikho enye ngaphandle kwe Ukuhanjiswa kwale ntlawulo egameni labatyali mali. Kukho ezona nkampani zibalaseleyo zokulingana eSpain kwaye zonke zinokukhula rhoqo kwinzuzo yazo. Ngomnye wemithombo yesalathiso yokuvula izikhundla kwimarike yemasheya ngaphandle kokuthatha umngcipheko ogqithileyo kwiintshukumo ezenziweyo.
Kwelinye icala, isalathiso sesahlulo esibizwa ngokuba yisahlulo sicetyiswa kakhulu ngenxa yeempawu zayo ezizodwa kuba akukho ndawo yokuphuculwa. Ngengqiqo yokuba azizizo iinkampani ezibonelela ngokumangalisa kubatyalomali abathatha izikhundla nangaliphi na ixesha ebomini babo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, ibonelela ngokhuseleko oluphezulu kwipotfoliyo yabatyali mali kuba benikezela ukusebenza okuzinzileyo nokuqinisekisiweyo Rhoqo ngonyaka, nantoni na eyenzekayo kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Olunye uhlobo lwentengiso
Alithandabuzeki elokuba enye imakethi yesitokhwe yenye indlela yabatyali mali abanomngcipheko omkhulu wokutya. Ayothusi into yokuba iinkampani ezisandula ukwenziwa zidityanisiwe kwaye azidweliswanga kwiimarike ze-equity ixesha elide. Inkqubo ye- UMaB Ihlengahlengise zonke iinkqubo ezikhoyo ukuze ezi nkampani zidweliswe kwintengiso, kodwa ngaphandle kokuyeka inqanaba elaneleyo lokungafihli. Ukulungiselela le nto, inani elitsha lalowo ubizwa ngokuba ngumcebisi obhalisiweyo wazisiwe, iingcali ezizodwa ukunceda iinkampani kuyo yonke le nkqubo, ukusuka ekungeneni kwintengiso ukuya kwimihla ngemihla kuluhlu lwabo.
Kwelinye icala, iMaB yandisa iinkampani kubatyali mali. Oku kuvumela ukwahluka kweephothifoliyo zangoku ngokutyala imali kwiinkampani ezintsha nakumacandelo. Kufuneka kugxininiswe ngaphezulu kwako konke ukuba i-Alternative Stock Market (MaB) yinkqubo yorhwebo yamazwe amaninzi (i-SMN). Ikhokelwe kwaye ilawulwe yiBolsas y Mercados Españoles (BME) kwaye ibekwe esweni yiKhomishini kaZwelonke yeNtengiso yezoKhuseleko (CNMV). Apho ibonelela iinkampani ngokufikelela ngokulula nangokufanelekileyo kwimarike yemasheya. Liqonga elenzelwe amashishini amancinci ngeeprojekthi zokwandisa unokuxhamla kwezibonelelo zentengiso: imali, ukubonakala, ukuthengiswa kwemali, ixabiso, njl.
Akukho bukho beemarike ezintsha
Ngokuchasene noko, akukho mkhondo weemarike zetekhnoloji kwizabelo zamazwe emva kokuba isalathiso seemarike ezintsha sinyamalale. Yayingumthombo wesalathiso samaxabiso ambalwa obuchwephesha kwimarike yemasheya kwilizwe lethu. Ngelixa kwelinye icala, imarike yemasheya yaseSpain ivula lo Lwesihlanu. I-Bolsas y Mercados Españoles (BME) idale ii-indices zesicwangciso esitsha kwi-Ibex 35 esekwe kulwazi oluqulathwe Iziphumo zexesha elizayo kunye nokukhethwa kukhetho apho kudweliswe iinkampani eziphambili zeSpanish Stock Market.
Apho kunyanzelekile ukuba uxhase umbono wokuba eyona nto iphambili efanayo yile umlinganiso wokungazinzi kwimarike. Ukuze kuqinisekiswe izicwangciso ezithile zotyalo-mali ngokweemveliso ezithengiswa kwimarike ye-BME. Isalathiso secandelo elintsonkothileyo elijolise kubatyali mali ababonelela ngamava amakhulu ekusebenzeni kwabo kwiimarike zezemali. Akumangalisi ukuba umngcipheko ekusebenzeni kwakho uphezulu kakhulu kwaye uxhomekeke kwizinto ezininzi ekubumbeni amaxabiso eeasethi zemali.
Olunye ukhetho luthe ngqo ngakumbi kwaye phakathi kwento evelele iVibex okanye eyaziwa njengesalathiso esilinganisa uloyiko kutyalo-mali okanye enye into enezinto ezintsha ezinje nge-Ibex 35 Buywrite ephindaphinda isikhundla somthengi ngaphakathi kwesalathiso sentengiso yaseSpain. Kwaye apho kunzima kakhulu ukusebenza ngenxa yeempawu zayo ezizodwa ezifanelekileyo kubo bonke abatyali malivenkile. Kodwa kwiqela elikhetheke kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Eyona indices zichaphazelekayo kwimarike yaseSpain